Nanafika ny lembalemban'i Cyril Hanouna ireo mpanao fihetsiketsehana, raikitra ny ady
By bryanekobe Last nohavaozina Oct 15, 2020
Hatramin'ny nahatongavan'ny coronavirus teo amin'izao tontolo izao dia niova ny zava-drehetra. Raha ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, toy ny TPMP an'i Cyril Hanouna ao amin'ny C8, dia tena zava-nitranga ho an'ny ekipa ny fanombohan'ny taom-pianarana.
Eny tokoa, io valanaretina io dia niteraka fiovana maro tamin'ny faritra rehetra. Ny Covid-19 dia nanery ny governemanta maro hanambara fa misy vonjy taitra ara-pahasalamana noho izany ny fitanana azy.
Fonja iray nanova ny zava-drehetra
Nisy fiatraikany tsara tamin'io aretina io ny fihazonana azy, saingy niteraka krizy ara-toekarena lehibe ary mazava ho azy koa ho an'ny firenentsika. Na ankehitriny aza dia voakasik'izany ny indostrian'ny trano fisakafoanana sy ny fialamboly. Ankoatr'izay, ny dingana nalain'ny governemanta dia tsy nanampy ny raharaha. Saingy ao ambadik'ireny asa sahirana ireny dia misy olona maro ahiana ho very ny zava-drehetra ao anatin'ny indray mipy maso. Eny tokoa, orinasa marobe no ahiana hiala amin'ny orinasa ary hametraka ny mpiasa tsy miasa.
TPMP, ny antso vonjy ataon'ny mpamoy fo
Raha tsy manana fanantenana intsony isika ary mieritreritra fa tsy misy mihaino antsika, dia manapa-kevitra ny hampiavaka ny tenantsika isika. Tampoka teo, andro vitsy lasa izay dia nisy fihetsiketsehana marobe tonga nanafika ny fidirana amin'ny studio izay naka sary an'i TPMP. Noho izany, ny fiarovana ny boaty dia tsy maintsy niditra an-tsehatra mba tsy handray refy tsy mitovy. Saingy tsy sitraky ny mpanao fihetsiketsehana izany ary nahatakatra izany haingana i Cyril Hanouna. Eny tokoa, te-hiteny fotsiny izy ireo haneho ny fahakiviana. Araka izany, nomen'i Cyril Hanouna mpampiantrano azy ireo maimaimpoana amin'ny microphone.
Taorian'izay dia niresaka ny toe-javatra iainany ireo mpanao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao. Ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana amin'izy ireo. Teny izay nanetsika mafy ny Baba tsara. Tampoka teo dia nanasa azy ireo i Cyril Hanouna mba hanao fampisehoana andro vitsivitsy taty aoriana mba hanao antsipiriany.
adyCyril Hanounampanao hetsi-panoherana
Guinea: Grand P dia nanambara ny firotsahany hofidina ho filoham-pirenena amin'ny 18 oktobra - Lahatsary
'Nofoanana' i Rihanna: voatsikera ny mpanao lisitra A noho ny fampiasana hadita silamo nandritra ny fampisehoana lamaody - Video
Fandraharahana: Cédric MOTCHEBONG dia mihevitra ny ho lehibe ...
Prev Manaraka 1 amin'ny 37